နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ Archives - Page 24 of 24 - Lupyo News
ရှေးလူကြီးတွေပြောပြတဲ့ လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ်
August 19, 2020 by Lupyo News
ရှေးလူကြီးတွေပြောပြတဲ့ လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် လူသိနည်းပြီး သတိမမူကြတဲ့ တံမြက်စည်းနိမိတ် ၁။ အပျိုတွေ တံမြက်စည်း ကျော်မိရင် အိမ်ထောင်မကျခင် ဗိုက် ကြီးတတ်ပါတယ်။ ၂။ အပျို၊ လူပျိုတွေ ခြေဖျား‌ပေါ်ကျော်ပြီး တံမြက်စည်း ခတ်မိရင် အဲ့ကလေးတွေ အိမ်ထောင်မကျတော့ပါဘူး။ တံမြက်စည်းကို တံတွေးနဲ့ ပြန်ထွေးခိုင်းပါ။ ၃။ အိမ်နီး ခြံနီးချင်းတွေ ကိုယ့် အိမ်/ခြံဝကစပြီး တံမြက်စည်း လာလှည်းသွားရင် ဝင်မယ့်လာဘ် မဝင်တော့ပါဘူး။ သူ့အိမ်‌ဝက ပြန်လိုက်လှည်းယူပါ။ ၄။ တံမြက်စည်းသစ်နဲ့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင် စ မလှည်းရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုခု အိမ်ဝချပြီး အိမ်ထဲ အရင်လှည်းထည့်ရပါတယ်။ ၅။ ကိုယ့်မိသားစုတွေအကုန် ကံဆိုး‌နေတယ်ထင်ရင် ရှေ့၊ နောက် အိမ်တံခါး‌တွေဖွင့်ထားပြီး အိမ်ရှိလူကုန် အိမ်လယ်ကစ ရှေ့‌နောက်အ‌ပေါက်ဘက်ကို … Read more
ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ဖြစ်အောင် အိပ်ပါ …
August 18, 2020 by Lupyo News
ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး အိပ်ဖြစ်အောင် အိပ်ပါ … သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘက်ကို စောင်းအိပ်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သက်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက ဦးနှောက်ထဲက ဓာတုအညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ဆီမှာ နှလုံးပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပူခြင်းဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညာဘက်ကိုစောင်းအိပ်ခြင်းက … Read more
နေ့စဉ်မျက်နှာသစ်တိုင် ရွတ်ဖတ်ပါမမေ့ပါနဲ့ မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ကျွန်ုပ်အား မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးတို့သည် ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ ဒေါသခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ။မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေသတည်း။ကျွန်ုပ်အား ပညာသင်ကြားပေးကြဖူးသော ဆရာသမားအပေါင်းတို့သည် ….. ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းပါစေ ဒေါသခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ၊ဆင်းရဲခပ်သိမ်း ကင်းပါစေ။မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာ ရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေသတည်း … Read more
August 16, 2020 by Lupyo News
Categories နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ, သတင်း
“ဂုဏ် ထူး (၆) ဘာ သာ ထွက် တဲ့ သူေ တွ နဲ့ ပဲ လော က ကြီး ကို တ ည်ေ ဆာက် ထား တာ လား
August 14, 2020 by Lupyo News
“ဂုဏ် ထူး (၆) ဘာ သာ ထွက် တဲ့ သူေ တွ နဲ့ ပဲ လော က ကြီး ကို တ ည်ေ ဆာက် ထား တာ လား? ကျွန်မငယ်ငယ် က စာမတော် ဘူး 1 to 10 မပြောနဲ့ 1 to 20 တောင် မဝင်ခဲ့ဘူး ကျွန်မလည်း ကိုယ့်စွမ်းအား ရှိသလောက် ကြိုးစားကျက်တာပဲ.. နားလည်တာတွေရှိသလို နားမလည်တာ တွေ လည်းရှိတယ်… ဒီတော့ အလွတ်ကျက် ဒါမေး ဒါဖြေ ကာလက စာမေးပွဲတွေမှာ အလွတ်မကျက် နိုင်တဲ့ကျွန်မ အဆင့်တွေ လည်း မကောင်းခဲ့ဘူး… စာတော်တဲ့အထဲမပါတော့ အတန်းထဲမှာကျွန်မ … Read more
August 10, 2020 by Lupyo News
ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဗိုက်ပြုတ်ဆေးနည်းလေး တင်ပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကြက်သွန်ဖြူအတက်ကြီး5တက်, ဂျင်းအနေတော်အတက် တစ်တက်!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတ်ထိုး, ကြက်သွန်ဖြူ5တက်အခွံခွါ, ဂျင်းကိုအခွံခွါ ပါးပါးလှီး!! ရေ2လီတာ ပွက်ပွက်ဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတွေထည့်ပီး နာရီဝက်ပြုတ်!! ပြီးရင်အဖတ်တွေဆယ်ပီးပစ်လိုက်ပါ!! အရည်ကိုအအေးခံပီး အစာမစားခင်နာရီဝက်အလိုမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်စာသောက်ပေးပါ!! တစ်နေ့3ကြိမ်ပေါ့!! တစ်ပတ်ကြာရင် ဗိုက်ပြုတ်သွားပါတယ်တဲ့ ကျမလဲအခုမှလုပ်ကြည့်တာပါ ချစ်တို့လဲ လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင် Thida Myint ============= Unicode ဖွငျ့ဖတျပါ ဗိုကျပွုတျဆေးနညျးလေး တငျပေးဆိုလို့ပါ သံပုယိုသီ3းလုံး, ကွကျသှနျဖွူအတကျကွီး5တကျ, ဂငျြးအနတေျောအတကျ တဈတကျ!! ပထမဆုံး သံပုယိုသီးကို 4စိတျထိုး, ကွကျသှနျဖွူ5တကျအခှံခှါ, ဂငျြးကိုအခှံခှါ ပါးပါးလှီး!!’ ရေ2လီတာ ပှကျပှကျဆူထဲကို ခုနကလှီးတာတှထေညျ့ပီး နာရီဝကျပွုတျ!! ပွီးရငျအဖတျတှဆေယျပီးပဈလိုကျပါ!! အရညျကိုအအေးခံပီး အစာမစားခငျနာရီဝကျအလိုမှာ ဖနျခှကျတဈခှကျစာသောကျပေးပါ!! … Read more
အသားလှုပ်​ခြင်း ဆိုင်​ရာ နိမိတ်များ ​အ​ဟော နှင့်​ အိမ်​မက်​မက်​ခြင်းဆိုင်​ရာနိမိတ်များအ​ဟော
August 9, 2020 by Lupyo News
အသားလှုပ်​ခြင်း ဆိုင်​ရာ နိမိတ်များ ​အ​ဟော နှင့်​ အိမ်​မက်​မက်​ခြင်းဆိုင်​ရာနိမိတ်များအ​ဟော ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ -👉ဦးခေါင်းလှုပ်ခြင်း ➖ ကျွန်၊သူများခိုင်းတာလုပ်မည်။ -👉ဦးရေလှုပ်ခြင်း ➖ အဖျားအနာဖြစ်မည်။ -👉ထိပ်လှုပ်ခြင်း ➖မင်း ၊ အကြီးအကဲ ပူဇော်ရသည်။ -👉နှာခေါင်းလှုပ်ခြင်း ➖ ချစ်သူရ ၊ချစ်သူများသည်။ -👉အထက်နှုမ်းခမ်းလှုပ်ခြင်း ➖ ရန်ဖြစ်ရမည်။ -👉အောက်နှုမ်းခမ်းလှုပ်ခြင်း ➖ အမြိန်အရသာ၊အစားကောင်းစားရမည်။(အဝေးစကားကြားရမည်) -👉မေးဖျားလှုပ်ခြင်း ➖ အချင်းများ၊စကားများရမည်။ -👉လည်းပင်လှုပ်ခြင်း ➖ တန်ဆာရသည်။(်ဇလုပ်-လှုပ်​မူလိုချင်​​သော အရာရမည်​) -👉ကျောကုန်းလှုပ်ခြင်း ➖ အဝတ်ပုဆိုးရသည်။ -👉နှလုံးသားလှုပ်ခြင်း ➖ ခင်ပွန်းတစ်ယောက် ဥစ္စာလာပေးသည်။ -👉ချက်လှုပ်ခြင်း ➖ နှစ်လိုသော ဥစ္စာရသည်။(ကောင်းချီးပေးသည်) -👉အင်္ဂါ ဇတ်လှုပ်ခြင်း ➖ စကားကောင်းဆိုရသည်။ဥစ္စာရသည်။(လင်းနှင့်မယားစကားများရသည်) -👉ခါးလှုပ်ခြင်း ➖ ဥစ္စာပျောက်သည်။ -👉ကိုယ်လှုပ်ခြင်း ➖ … Read more
“ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ”..
August 3, 2020 by Lupyo News
“ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့ သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ”.. ဆင်းရဲတာ မကြောက်ပါနဲ့… သူများမျက်ရည်ပါတဲ့ ထမင်းဟင်းကိုစားပြီး အသက်ရှင်ရမှာကို ကြောက်ပါ အောက်ကျပေးရတာကို မရှက်ပါနဲ့ ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုယ့်မာနကြောင့် လက်လွှတ်ပေးလိုက်ရတာကို ရှက်ပါ အထီးကျန်ရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ စိတ်ဓာတ်ချင်းမတူ စရိုက်ချင်း မဆီလျော်တဲ့ သူနဲ့တဘဝလုံး ဝဋ်ခံရမှာကို ကြောက်ပါ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ ဆုံးရှုံးရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့ ကိုယ်မချစ်မနှစ်သက်သော သူတွေနဲ့ တမိုးတည်း နေရမှာကို ကြောက်ပါ ပကာသနဆိုတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတွေကို မမက်မောပါနဲ့ ရိုးရှင်းသော ဘဝနဲ့အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဘဝကို မက်မောပါ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာသေးတာကို စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမှာ ပျော်အောင်မနေတတ် လက်မခံတတ်တာကိုဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ပျက်ပါ လူသားတိုင်းလိုလိုမှာ ကိုယ်ကိုင်စွဲထားတဲ့ ပေတံအရ major minor … Read more
မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ ဆင်းကဒ်တွေ ဒီလကုန်အပိတ်ခံရမည်….
မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ ကဒ်တွေ ဒီလကုန်အပိတ်ခံရမည်ကိုယ်ကိုင်တဲ့ကဒ်က ကိုယ့်နာမည်နဲ့လား စစ်ပါပြဿနာဖြစ်လာရင် ရှင်းရခက်ပါတယ်နော်……. မှတ်ပုံတင် တစ်ခုမှာ SIM Card နှစ်ခုပဲရပါမယ်အော်ပရေတာ တစ်ခုကို ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းအော်ပရေတာ (၄) ခုရှိတာဆိုတော့SIM Card ( ၈ ) ခုလောက်တော့ ကိုင်လို့ရပါတယ်… April 30 နောက်ဆုံးဆိုတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေသိအောင် Share ထားလိုက်အုံးနော်… ➧ SIM Card မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ • Online မှ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Operator ၏ Mobile Applications, Website (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ၏ အရောင်းဆိုင်များတွင် မှတ်ပုံတင်ပါ…။ • မိမိ၏ အမည်ရင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်၊ နိုင်ငံခြားသားအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အမှတ် (သို့မဟုတ်) … Read more